I-GDmini2 iyi-microsonic micro-reactor ye-indirect, control-controlled control of media media. Izicelo zibandakanya: i-Homogenization, i-emulsification, i-particle synthesis, isizinda se-solvent, i-cell lysis nokuhlukaniswa.
I-GDmini2 iyi-homogenizer ye-ultrasonic ekwakhekeni kweglasi eliqondile. I-homogenizes, ihlakazeka, iphazamisa amangqamuzana noma i-emulsifies uketshezi olugeleza ngaphakathi kwe-tube yangilazi. Ingasetshenziswa njenge-reactor inline ye-single-pass noma i-recyculated processing ultrasonic.
I-Simple-Setup & Qalisa
Ukuhlanganisa i-GDmini2 ekusethweni kwenqubo yakho
wena uxhuma ukuphela komunye tube tube ngephutha futhi
phambela indaba yakho kuyo
ukuxhuma amanzi (isib. amanzi edolobheni) kumabhoyizi asetshenzisiwe
Shintshela i-generator ultrasonic – yilokho okulula
Lena yiklamo eyingqayizivele futhi elula ukuyisebenzisa. By ukuhlanganisa vibrations okukhulu ultrasonic kuya tube ingilazi, the tube izindonga kudlidliza ultrasonically futhi ngaleyo ndlela sonicate the liquid egeleza ngokusebenzisa tube. Kuyinto ejulile kakhulu, efanelwe futhi eqhubekayo ukuthi ithangi le-ultrasonic. Futhi isebenza ngokulandelana ngokuqhubekayo – 24hrs, izinsuku ezingu-7 ngesonto, izinsuku ezingu-365 ngonyaka.
Amandla we-Ultrasonic nge-Intelligent Control
I-GDmini2 inikwe amandla yi-state-of-the-art I-UP200St Generator (ama-watts angu-200) okuza kuhlonywe ukuvama okuzenzakalelayo kwe-frequency, ukulawula ama-amplitude, isikhombikubona somsebenzisi wesikrini, ukuthintana kwekhadi le-SD ngokuzenzakalelayo (csv / Excel), ukulawula ukushisa nokunye okuningi.
I I-UP200St-TD Transducer (ama-watts angu-200) okuboniswe esithombeni kuyunithi ehlukahlukene ngempela, engasetshenziselwa i-setups eminingi kakhulu kune-GDmini2 kuphela. Ingasetshenziswa njenge
uphondo lwekomishi, isb for the sonication of small centrifuge vials
isampula ephelele yokulungiselela kanye neyunithi yokunakekela, isb ukuze isetshenziswe nge-particle size analyzer
i-reactor flow flow cell noma i-sonication yamachibi amancane we-centrifuge
I-Sonication engaqondakaliyo, okushisa okushisa
Idizayini ye-GDmini2 iqukethe ijajethi yensimbi engenasinakha ejikeleza ithubhu yeglasi. Ukuhlanganiswa okucindezelayo (ngokujwayelekile amanzi) kudlulisa izidakamizwa ku-tube yangilazi. I-valve yangemuva engezansi yomshini kanye nomshini wokucindezela oxhunyiwe uqinisekisa ukucindezela okuhambisanayo kokuxhumeka kwe-ultrasonication ephumelelayo. I-couplant isetshenziselwa ukushisa lokushisa (ukupholisa) okuzungeze ithubhu yeglasi, futhi. Ngakho, ungakwazi ukulawula ukushisa kwenqubo ngokunembile. I-UP200St izoqapha iphrothotholo lokushisa, isib.
I-Hielscher GDmini2 ku-UP200St-TD Transducer (ama-watts angu-200)
Ishubhu lengilazi ukuphela kwento ehlobene nenqubo yakho yoketshezi, inqubo ye-sonication imahhala ekungcolisweni kwokomoya. Ishubhu lengilazi lingaba yinto elahlekayo, eshibhile futhi eshintsha kalula. Lokhu kwenza kuthandeke kakhulu kwezemithi R&D noma ukukhiqiza, ukuthuthukiswa kwezidakamizwa noma amakhemikhali okhethekile. Ngokuvamile, i-GDmini2 ixhunywe kumpompi wesirinji wokucubungula oyinyumba. Singenza i-tube yezinye izinto ezifana ne-polyamide, i-polyethylene, ingilazi ye-quartz, insimbi noma i-ceramics. Ungakwazi ngisho nokufaka amashubhu akho. Sinikeza imiklamo ekhethekile eyenziwe ngokwezifiso ze-upscaling kuya ezinhlobonhlobo zenqubo. Sicela uxhumane nathi ukuze uthole imininingwane!
I-Hielscher Ultrasonic Micro-Reactor
Thola i-GDmini2 yakho!
I-GDmini2 itholakala kalula futhi ngokuvamile isitokisini esitolo sethu. Sizojabula ukukuthumela isiphakamiso sezinto eziphakanyisiwe. Sicela usazise, ​​ukuthi sizoxhumana kanjani nawe futhi usazise mayelana nesicelo sakho, ukuze sikwazi ukukunika izincomo ezengeziwe.